Accueil > Gazetin'ny nosy > Faha 90 taonan’ny RNM : Nampiesonin’i Lalatiana Rakotondrazafy
Faha 90 taonan’ny RNM : Nampiesonin’i Lalatiana Rakotondrazafy
Nanomboka omaly zoma faha 23 jolay 2021 ny fankalazana ny faha 90 taona niorenan’ny RNM na ny Radiom-pirenena Malagasy. Tetsy amin’ny foiben’ny radio tetsy Anosy no natao ny lanonana amin’izany.
Ny taona 1931 no nisy ny radio voalohany teto Madagasikara izay ny mpanjanantany frantsay no nanangana azy. Radio Tananarive no anarany tamin’izany fotoana izany ka tao Antaninarenina no nisy ny foibeny. Nivadika teny Anosy izany ny taona 1963 rehefa nahaleontena i Madagasikara. Niovaova araka ny vanim-potoana ny anarany toa ny hoe Radio Madagascar, ary dia niafara tamin’ ny RNM na Radio nasionaly Malagasy izao.
Mivoy ny vaovaom-panjakana ny RNM. Iadian’ny mpanohitra sy ny mpitondra ity radio ity. Ny taona 2009 dia may noho izany ady politika izany RNM.
Maro ny mpiasa tranain’ny RNM no mbola tonga nankalaza ity faha 90 taona ity toa an’i Jean Louis Rafidy, Latimer Rengers, Jean Claude Andrianaivo …Teo amin’ny teknisianina dia mbola hita tonga teo koa i Venance Rasamimanana sy Rajaonarison Norbert izay nanana ny toerany amin’ny nampihodina ity onjam-peo ity. Ny resaka tantara dia nahitana an’i Gege Rasamoelina, Clara , Dadavy sy ny hafa maro…Nahaliana tanteraka ny zavatra novokarin’izy ireny ary mbola tsaroana hatramin’izao.
Gaga nefa ny olona tonga teny rehetra fa tsy tonga nanatrika izany ny minisitrin’ny serasera sy ny kolotsaina Lalatiana Rakotondrazafy. Niesona tanteraka ireo olona tokony homena mari-boninahitra. Nody maina ny miaramila efa tonga teo hanao ny arifenitra amin’izany. Tena kitoatoa ary kilalaon-jaza. Nampalahelo ny fankalazana izany faha 90 taona ny RNM izany.